Blog - Chain na-esote ya
Itufu bụ otu ụdị azụmaahịa ama ama n’oge a. O guzosie ike dị ka ọrụ dị mkpa na obere itinye ego na mgbanwe. Agbanyeghị, ịtọlite ​​ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na igosipụta ngwaahịa gị ezughi; nkwalite na afọ ojuju ndị ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa iji mee ka azụmaahịa ọ bụla nwee ọganiihu.
Otu onye azụmaahịa dị otú a, nke na-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu iji rụọ ọrụ azụmaahịa gị na-akwụghị ụgwọ n'ụwa niile bụ Nextschain. Ka anyị leba anya n’ihe kpatara Nextschain ji bụrụ onye ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ ya.
Nhọrọ sara mbara: Nextschain nwere ụdị dị iche iche maka ndị ahịa na-eji Shopify APP, na-enyere ha aka ịhọrọ ọtụtụ puku ngwaahịa na-emeri site na katalọgụ ha ma tinye ya na ụlọ ahịa ha. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịhọrọ niche akọwapụtara; ọ bụrụ na onye ahịa bụ onye mbido, ebe ọ na - enyere aka inweta obi ike ma nyochaa mkpa ahịa. Ọzọkwa, ọ na-ebelatakwa ihe egwu ahụ.
Ahịa na ire ahịa: Nextschain na-enye ndị ọrụ ohere ilekwasị anya na akụkụ ahịa na azụmaahịa, ebe ndị ọkachamara ha na-ejikwa ngwaahịa na usoro mbupu. Ọnụ ahịa ahịa ha kacha mma n'ahịa, nke na-enye ha ohere irite uru dị elu ma bulie ego ha ga enweta.
Atụmatụ dị iche iche: Dị ka onye mbido, onye ọ bụla chọrọ ịmalite azụmahịa ya na obere ego. Nextschain nwere atụmatụ mbido nke na-enweghị n'efu. Otú ọ dị, ozugbo ndị ọrụ nweta ahụmahụ; ọ bụ ihe amamihe iji kwalite na atụmatụ ka mma maka ahụmịhe kachasị mma.
Nhọrọ mbupu: Nextschain bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwaahịa ole na ole na-ebufe iwu n'ọtụtụ mba na ọnụahịa dị ọnụ ala. Usoro ọgụgụ isi ha nwere ọgụgụ isi na-agbanwe na-akpaghị aka ma na-ebufe iwu n'ọdịnihu tupu oge dị elu dị ka Black Friday ma ọ bụ Christmas maka nnyefe oge.
Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi: Mgbasa mgbasa ozi bụ otu n'ime ọwa kachasị emetụ ma nwee ike ịbawanye ahịa na ịbawanye uru. Nextschain na-enyere aka zụọ ahịa ahịa ngwa ahịa nwere ahaziri iche, mgbasa ozi Facebook akọwapụtara na ngwaahịa ọ bụla edepụtara. Ọzọkwa, ọ na-enyere ha aka ịkwalite na ijikwa azụmahịa ha.
Iwuli aha akara: N'ihi asọmpi sara mbara, iwulite aha ahụ abụrụla ihe dị oke mkpa maka azụmaahịa. Na Nextschain, ndị ọrụ nwere ike ibipụta akara ngosi nke nhọrọ ha na igbe nkwakọ ngwaahịa iji pụta na asọmpi ahụ. N'ihi nke a, ndị ahịa nwere ike iwulite ntụkwasị obi na ndị ahịa ha ogologo oge wee nwee ọ loyaltyụ ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Ọrụ ndị ọzọ: Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ibipụta ozi ụlọ ọrụ onye ọrụ na akwụkwọ ọnụahịa. Nextschain na-enyere akwụkwọ ọnụahịa ahaziri n'efu na iwu niile. Ewezuga nke a, ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na ngwaahịa a n'ime ụbọchị asaa, ndị ọrụ tozuru oke inweta nkwụghachi zuru ezu.
N'ihi ihe ndị a dị n'elu, Nextschain apụtawo dị ka otu n'ime ụdị ndị a tụkwasịrị obi na ahịa ụwa. Nlekọta ndị ahịa ha na-enye ọrụ kacha mma post-sales. Maka iwulite ọnụnọ n'ịntanetị, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị ọsọ iji bido na ntinye ego dị ala. Site na ọrụ mgbagha nke Nextschain, ndị ọrụ nwere ike ilekwasị anya na mma yana ogo ma bulie azụmaahịa ha.